Tafiditra ao anatin`izany ireo rakitsary (clip) mampandihy fitombenana sy ireo fihetsika mamoafady hafa. Nampatsiahy ny teo anivon`ny minisiteran`ny serasera, mba hiarovana ireo zaza tsy ampy taona, ka nampitandrina ny rehetra, indrindra ny mpamokatra sy ny haino aman-jery na ny tambajotran-tserasera, ny amin`ny famoahana sary na horonantsary mamoafady. Voararan’ny lalàna tanteraka io ary raha misy mbola minia manao dia hiroso amin`ny fanasaziana ny fanjakana. Voarakitra ao anatin`ny fehezan-dalàna momba ny serasera izany ka miantso ny rehetra hanaja ny lalàna ny minisitera. Mifanohitra amin`ny kolontsaina sy soatoavina Malagasy rahateo izy ireny ary fady ihany koa amin`ny mpianaka na mpianadahy. Manana andraikitra amin`izany ny mpisehatra amin`ny zavakanto, ny fahitalavitra ary ireo mpikirakira ny aterineto. Raha misy fandikan-dalàna dia handray andraikitra avy hatrany ny minisitera, araka ilay fanambarana. Amin`ny ankapobeny, esorina tsy ho mpikambana ao amin`ny OMDA ireo mpanakanto mamoaka horonantsary toy ireny, hoy hatrany ny minisitera. Andrasana izay mety hasetrin`ireo mpanakanto ity fanapahan-kevitra iray ity.